डा. केसीको जीवनरक्षाको माग गर्दै स्वास्थ्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र – Koshidaily
डा. केसीको जीवनरक्षाको माग गर्दै स्वास्थ्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र
access_alarms Koshi daily ६ आश्विन २०७७, मंगलवार ०९:१३	chat_bubble_outline 0	Comments
६ असोज, काठमाडौं । विभिन्न माग राखेर आमरण अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षाको माग गर्दे स्वास्थ्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको अनुपस्थितिमा राज्यमन्त्री नवराज रावतले ज्ञापन पत्र बुझेका थिए ।
‘हामी नेपाली, हाम्रो नेपाल’ नामक संस्थाले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा डा. केसीले उठाएका माग सम्वोधन गर्न आग्रह गरिएको छ । उक्त संस्थाका संयोजक ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीका अनुसार ज्ञापनपत्र बुझ्दै राज्यमन्त्री रावतले डा. केसीका मागप्रति सरकार सकारात्मक रहेको र चाँडै सम्बोधन हुने आवश्वासन दिएका छन् ।
‘राज्यमन्त्रीज्यूले मौखिक आश्वासन दिनुभएको छ, त्यहीअनुसार व्यवहार हुने छ भन्ने आशा राखेका छौं,’ उनले भने । स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल होम आइसोलेसनमा रहेकाले राज्यमन्त्रीले ज्ञापन पत्र बुझेका थिए ।